Shiinaha Elastic band dhegaha dhafan sameynta mashiinka maaskaro diyaarad diyaarad la tuuro laastikada dhego faasas mashiinka machining warshad iyo saarayaasha | Nadiifinta
Balaastikada dhegaha laastikada isku dhafan sameynta mashiinka maaskarada mashiinka diyaaradda oo la tuuro mashiinka dhejiska faashad dhegaha
Mashiinka diyaaradda laastikada ah wuxuu ku habboon yahay soosaarka otomaatiga ah ee maaskarada diyaaradda Khadadka wax soo saarka ee mashiinka maaskarada dhejiska dhegaha ee laastikada ah waxaa badanaa loo isticmaalaa soosaarka tooska ah ee maaskarada diyaaradda. Inta badan waxaa ku jira duubista dharka oo dhan ka dib furitaanka, duubista geesaha, codsiga sanka, laabashada, goynta suunka dhegta iyo isku darista, iyo goynta wax soo saarka dhammaatay. Maaskarada la dhammeeyay waxaa soo saaray madal qaadayaha. Mashiinka laastikada ah waxaa loo isticmaalaa inuu yahay alaabta ceyriinka ah ee loogu talagalay dhegta, taas oo iskeed isu sameysa isla markaana jirka ku dhex milma, si kor loogu qaado tayada maaskaro. Ku rakibay mowjad ultrasonic ah, waxay u isticmaali kartaa mawjad deg deg ah si ay uhesho, u gooyso ama u daabacdo qalabka si dhakhso ah, xakamaynta PLC, waxqabadka xasilloon, hawl fudud iyo badbaadin xoog leh, wax soo saar sare.
Khadka wax soo saarka mashiinka maaskarada mashiinka diyaaradda ee dhegaha laastikada ah waxaa badanaa ka mid ah quudinta gariiradda, laabashada iyo cadaadinta, buundada sanka quudinta quudinta iyo sameynta maaskaro. Tikniyoolajiyadda goynta maaskaro. Adoo isticmaalaya mawjadaha 'ultrasonic', maaddada si dhakhso leh ayaa loo dhejin karaa, loo jari karaa ama loo dhoofin karaa mawjad deg-deg ah, taas oo xasilloon, shaqo-badbaadin iyo waxtarka sare.
Mashiinka maaskaro diyaaradda dhegaha ee Elastic waa qalab otomaatig ah, oo ah mashiinka wax soo saarka maaskaro saddex-cabbir leh oo leh lakabka miiraha marada. Laga bilaabo quudinta alaabta ceeriin illaa dhammeystirka wax soo saarka waa xariiq hawlgal otomaatig ah. Dharka laastikada ah ayaa loo isticmaalaa inay yihiin alaab ceyriin ah suunka dhegta, kaas oo si otomaatig ah jirka loogu mideeyo.
--- Mashiinka oo dhan oo ka socda quudinta maaddada asaasiga ah, gelinta khadka birta sanka, xiritaanka geesaha, goynta, dhammaantood si otomaatig ah ayaa loo dhammeeyaa.
--- Isku-darka ultrasonic ee isku-dhafan, saddex lakab.
--- Naqshad qaabaysan, hawlgal ammaan ah oo fudud, dayactir habboon, digniinta xiritaanka otomaatiga ah.
--- Mashiinka oo dhan wuxuu qaataa qaab-dhismeedka daawaha aluminium, qalab tayo sare leh, qalab xasilloon oo lagu kalsoonaan karo, caddayn miridh iyo fududahay in la nadiifiyo.
--- Mashiinku waa mid is haysta, oo cabirkiisu yaryahay oo aan boos qaadanayn.
--- Xakamaynta barnaamijka PLC, xasilloonida sare, heerka fashilka hooseeya.
Magaca badeecada mashiinka maaskaro diyaaradda xarig dhegaha laastik ah
Qeexida qalabka 3600 * 900 * 1900mm
Qaabka qalabka sy-200t
Awood shaqo keena w 220 V / 50 Hz
Wax soo saarka wax soo saarka 150-200pcs / min
Awoodda qalabka 3kw
Hore: Nooca Koobka, Nooca Koobka Mashiinka Maaskaro Semi-oomaatikada ah, Mashiinka maaskaro nuuca nambarka nus-tooska ah
Xiga: Automatic xawaaraha sare sanka daabacaadda mashiinka maaskaro laabanto
Mid Ka Mid ah Jiidka Mashiinka Maaskaro
Soo-saaraha Maaskaro, Baakadaha Xumbada Baakadaha, Dharka Xumbada Cas, Maqaarka Xumbada Xakamaynta, Mid Ka Mid ah Jiidka Mashiinka Maaskaro, Mashiinka Maaskaro Wejiga,